Toeram-piantsonan'ny garazy, Rafitra fijanonana an-tsambo, garazy fiara - Mutrade
Manatsara ny fijanonanao amin'ny alàlan'ny vahaolana isan-karazany Mutrade
Ny famokarana avo lenta dia manome fitaovana azo antoka sy azo antoka
Fanohanana ara-teknika matihanina amin'ny fametrahana sy fikojakojana ny fotoana rehetra
Qingdao Mutrade Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpamatsy vahaolana arofenitra mekanika voalohany indrindra ao CHINA. Manolo-tena izahay
manome ny vahaolana fitobiana sahaza sy mety indrindra ho an'ny mpanjifantsika manerana an'izao tontolo izao.
NAHOANA NO HIDIA ANTSIKA
Ny vokatra rehetra natolotr'i Mutrade dia notsapaina sy nohavaozina in-jato tao anatin'ny 10 taona lasa. Ny fanaingoana, ny fitaovana, ny fomba famokarana, ny famaranana ary ny fanamboarana dia havaozina mba hanomezana fiakarana fijanonan'ny fiara fitokisana azo antoka kokoa ho an'ny mpanjifantsika.
Ny rafitra fijanonana mutrade dia ahafahan'ny mpampiasa manatsara ny toerana fijanonan'ny fiara amin'ny alàlan'ny vahaolana tsotra, fametrahana haingana, fandidiana mety ary fikojakojana ny vidiny mirary.
Ireo rafitra dia nohamafisina manokana mba hitondra karazana fiara isan-karazany. Notsapaina tamin'ny fitsapana be dia be nifototra tamin'ny fenitra henjana tany amin'ny firenena samihafa, tsy misy isalasalana fa ny vokatra rehetra avy amin'ny Mutrade dia azo atokisana hatrany hiarovana ny mpampiasa sy ny fiara.
Firenena 90+ napetraka
Fiasa fiarovana marobe
Voamarina ny TUV
20000+ traikefa fiantsonana
Famolavolana mandroso, famokarana marina
BDP-4: Toeram-piovan'ny piozila miafina Hydro ...
BDP-3: Rafitra fijanonan'ny fiara mifono vy Hydro 3 L ...
Starke 3127 & 3121: Asandrato ary atsofohy ny Automa ...
BDP-2: Rafitra fijanonana fiara mandeha ho azy ...
Starke 2227 & 2221: Sehatra roa paositra roa ...
Starke 2127 & 2121: Fiara roa misy paositra roa ...
Hydro-Park 3230: Manandratra avo ny volo ...
Lisitry ny tranga
Fananganana parking tsotra
Mitadiava fomba tsotra hanatsarana ny toerana fijanonan'ny fiara amin'ny alàlan'ny fanavaozana sy ny haitao Mutrade
Rafitra fijanonana mandeha ho azy
Mitadiava traikefa momba ny fomba itondran'ny rafitry ny fijanonan'ny fiara Mutrade fiara fitobiana betsaka kokoa noho ny eritreretinao.
Traikefa amin'ny kilasy voalohany
Ny fampiakarana fiara sy ny rafitra mutrade dia manome vahaolana mamorona ho an'ny garazy voafetra mba hampitomboana ny toerana ipetrahana, hanatsara ny fahombiazan'ny toerana sy ny fizotry ny fijanonan'ny fiara.
Miara-miasa aminao izahay mba hitady vahaolana!
Vonona handrafitra vahaolana namboarina manokana ho an'ny toerana ilainao ny manam-pahaizana efa manana fahalalana an-taonany. Makà teny nalaina avy hatrany!
Hydro-Park 3230: Sehatra fijanonan'ny fiara miorina amin'ny vatan-tsolika Hydro
Starke 3127 & 3121: Rafitra fijanonan'ny fiara mandeha sy mihetsika amin'ny alàlan'ny mpametaka ambanin'ny tany
BDP-6: Fitaovana haingam-piarakodia haingam-pandeha haingam-pandeha haavo 6 ambaratonga
Puzzle Parking System , efatra Post Car ascenseur , Fiakarana posy roa, Puzzle Car Parking System , efatra Post Parking System , roa Post Car Parking Lift ,